#ZimbabweanLivesMatter Archives - Zimbabwe Situation
SA to send new envoys to crisis-hit Zimbabwe
President Cyril Ramaphosa said he would send special envoys to Zimbabwe within "days" in a second attempt to resolve an ongoing crisis. Source: SA to ...
Zimbabwe denies human rights abuses amidst government crackdown
There was arguably an immense amount of goodwill given to Zimbabwe’s “new dispensation” when Robert Mugabe’s almost four-decade tenure was abruptly en ...
There is no peace in Zimbabwe, but an intense crisis of paralyzing fear of a ruthless uncaring regime
It never ceases to thoroughly perplex me, if not downright shocking, whenever those in the Zimbabwe ruling elite engage in their usual self-congratula ...
Source: Reforms, what reforms? – NewsDay Zimbabwe Stir The Pot :Paidamoyo Muzulu LAST week Zimbabwe was in a sort of frenzy politically. Pol ...
Source: Leave us alone: Zanu PF – NewsDay Zimbabwe BY MOSES MATENGA ZANU PF has reacted angrily to the global outcry to stop human rights ab ...
Let’s Stop Pretending We Have an Independent Judiciary
If Zimbabwean lives truly matter, we will stop pretending that we have an independent judiciary. ‬ Source: Let’s Stop Pretending We Have an Independe ...
Source: #ZimbabweanLivesMatter – Zimbabwe Vigil Diary: 8th August 2020 You would have to have a heart of stone not to laugh at President Mnangagwa ...
The Booker Prize-winning novelist was arrested at a political demonstration last week against Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's government. S ...
Attention: Former Liberation Movements Source: ANC Gets Another Letter Calling for Mnangagwa’s Removal - The Zimbabwean Emmerson Mnangagwa ...
SA govt concerned about reports of human rights violations in Zim – #Asakhe
Source: SA govt concerned about reports of human rights violations in Zim - #Asakhe - CITE South African President, Cyril Ramaphosa (left) and P ...